यु-१९ बिश्वकप : पाकिस्तानलाई अफगानिस्तानले दियो झट्का ! – WicketNepal
यु-१९ बिश्वकप : पाकिस्तानलाई अफगानिस्तानले दियो झट्का !
Birat Jung Rayamajhi, २०७४ पुष २९, शनिबार १०:२५
विकेटनेपाल, पौष २९ – शनिबार
आजदेखि न्युजिल्याण्डमा यु-१९ बिश्वकप सुरु भएको छ।
प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा समुह ‘डी’ मा रहेका पाकिस्तान र अफगानिस्तान बीचको खेलमा अफगानिस्तानले पाकिस्तानलाई पराजित गरेको छ। कोबहाम ओभल मैदानमा पहिले ब्याटिंग गर्दै पाकिस्तानले १८८ रन मात्रै बनाएपछि अफगानिस्तानले मात्र ५ विकेट गुमाई लक्ष पुरा गर्दै पहिलो जित हात पारेको हो।
पाकिस्तानले दिएको १८९ रनको लक्ष्य पछ्याउदै मैदानमा उत्रिएको अफगानिस्तानले ४७.३ ओभरमा मात्र ५ विकेट गुमाउदै लक्ष्य पुरा गर्यो । उसका लागि दर्विस रसूलीले अविजित ७६ रनको पारी खेल्दै जितसम्म पुर्याएका थिए । ७८ बलको सामना गरेका उनले ४ चौका सहित २ छक्का प्रहार गरे ।
अर्धशतक बनाएपछि दर्विस रसूली
यस्तै इक्रम अलि खिलले ९३ बलमा ४ चौका सहित ४६ रनको पारि खेल्दै रसूलीसँग चौथो विकेटका लागि ७५ रनको साझेदारी गरे। ओपनर रहमनुल्लाह गुर्बज़ले ३१ रन, निसर वह्दतले १९ रन तथा अज्मुताल्लाह ओमार्जईले अविजित १२ रनको पारि खेले ।
बलिंगतर्फ पाकिस्तानका हसन खानले २ विकेट हात पार्दा मोहम्मद ताहा र शाहीन शाह अफ्रिदीले १/१ विकेट हात पारे ।
खेल जित्न १ रन आबश्यक रहेको अवस्थामा म्यान अफ द म्याच घोषित दर्विस रसूलीले छक्का प्रहार गर्दै जित दिलाएका थिए।
टस जितेर पहिले ब्याटिंग गरेको पाकिस्तानले ४७.४ ओभरमा सबै विकेट गुमाउनु अघि मात्र १८८ रनको योगफल तयार पारेको थियो ।
उसका लागी विकेट किपर ब्याट्सम्यान रोहैल नाजिरले सर्बाधिक ८१ (९ चौका) रनको पारि खेलेका थिए । पहिलो २ विकेट २३ रनमा गुमाएको अवस्थामा ब्याटिंग गर्न आएका नाजिरले अलि ज़र्याब असिफ (३० रन) सँग मिलेर तेस्रो विकेटको लागि ८८ रनको साझेदारी गरेका थिए । अन्य ब्याट्सम्यानले खासै उल्यख्य प्रदर्शन गर्न नसक्दा २४ अतिरिक्त रन पाएको थियो ।
बलिंगतर्फ अफगानिस्तानका अज्मुताल्लाह ओमार्जईले ३४ रन खर्चेर ३ विकेट तथा कैस अहमदले ३८ रन खर्चेर समान ३ विकेट हात पारे । यस्तै नवीन उल हकको नाममा २ तथा जाहिर खान र निशर वह्दतले १/१ विकेट लिए ।
यसभन्दा अगाडी २०१७ को नोभेम्बरमा मलेसियामा आयोजित यु १९ एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा पनि अफगानिस्तानले पाकिस्तानलाई ७ विकेटले पराजित गरेको थियो । बिस्तृत जानकारी
खेलमा नेपालका बुद्धि बहादुर प्रधानले अम्पाएरको भूमिका निर्बाह गरेका थिए ।